देशदृष्टि – Page 28 – Blog by Milan Bagale
रातो पासपोर्टमा ढकालको ‘कालो मसी’
नेपाली साहित्यका ‘सिद्धहस्त साहित्यकार’ मानिएका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत खडानन्द ढकाल उर्फ प्रतिक ढकाल यतिबेला पत्रकारको भाषामा ‘फरार’ छन । मैले २०५५ सालको आसपास मधुपर्कमा उनले लेखेको ‘नेपाली हुलाक टिकटमा प्रकाशित ब्यक्तित्वहरु’ या यस्तै केही शीर्षकको आलेख उनको प्रथम रचनाको रुपमा पढने मौका पाएको थिए । त्यतिबेला म तेह्र – चौध बर्षको हुदो हु । मैले भर्खर हुलाक टिकट संग्रह गर्न थालेको बखत उनको आलेख पढेपछि खोजीखोजी साहित्यीक र अन्य ब्यक्तित्वको टिकट संग्रह गरेको थिए ।
साहित्यकारको एउटा टिकट पाउनलाई अन्य १० थान टिकट साथीभाईलाई सट्टामा दिएको मलाई अझै याद छ । त्यतिबेलादेखि आजसम्म प्रतिक ढकाल मेरा लागी धेरथोर ‘प्रिय’ छन । उनको ‘काली पनि सेती पनि’ र ‘हिमालपारी पुगेपछि’ लगायतका किताब पढेपछि यात्रा गर्दाका कुरा लेख्ने शैली अलिकती सिकेको छु । तर पनि उनको किताबको ‘बेस्ट सेलर’ को उपाधीलाई भने मैले उहिलेदेखि नै ‘खुरापाती’ को संज्ञा दिएको छु । यात्रा साहित्य बेस्ट सेलर मा पर्ला भन्ने मलाई कहिल्यै लागेन । ‘बजारमा राखे फलानाको किताब एउटै बिक्दैन प्रदशनीमा राखे कोल्ले हो डोकै उठाएर लैजान्छ अनि बेस्ट सेलर!’, एकजना पुस्तक ब्यवसायीले गतसाल मलाई अलिकति कुरो चुहाएका थिए । तर पनि मैले उनको कुरोमा मतलब राखिन र ढकालका किताब किनेर घरमा ल्याए । स्वादले पढे । म पनि अलिअलि डुलेर अलिकति लेख्ने डुलुवा केटो भएकोले ढंगले लेख्ने धेरथोर तरिका सिक्न पाएकोमा लेखक र किताब दुबैलाई मनमनै मजैले धन्यबाद दिएथे ।
अलि दिनअघि रातो पासपोर्ट खाने ‘कालो मान्छे’ को सूचीमा खडानन्द ढकालको नाम पनि छापाले छापिहाल्यो ।’हुलाकका जागीरे’ प्रतिक ढकालको नामलाई कुनचाहि ‘खडानन्द’ ले मोसो दल्यो होला ?यस्तै सोचेर आनन्दले बसिराथे म त । समयले पर्दा उघार्दै लग्यो । रातो पासपोर्टमा कालो मसी दल्ने आरोपीत मान्छे त लेखक प्रतिक नै पो रैछन । त्यसपछि मैले १० पटक उनका किताब पल्टाए । अह ,भ्रष्टाचार कतै गन्हाएन । चिरिच्याट्ट लेखाई बाहेक दायाबाया केही गन्हाएन । तर पात नहल्लिएनी अलिअलि हावा चलेको छनक भने आयो । महोदयले लेखाईलाई भ्रष्टाचार ओत्ने ,पराले छानो, त बनाएनन ?मेरो मनमा हुरी चाहि चलेकै छ । अदालतले भ्रष्ट प्रमाणित गर्यो भने लेखक ढकाललाई म पनि स्यानोतिनो भाटे कारबाही गर्नेछु ।
उनका सबै किताब पानी परेको रात पीढीको डिलमा ल्याएर थुपार्नेछु । बाकी न्याय ‘बर्खे भेल’ आफैले गर्नेछ । उनको साहित्यीक नामको हविगत पनि त्यै हनेछ । गलत काम गरेको आरोप लाग्नासाथ मान्छेलाई भित्तामा पुर्याउने र जिउदो लाश बनाउने सढेगलेको चलन नेपाली समाजमा छदैछ । त्यो कुरौटे बानी छापामा पनि अलिअलि पोखिने गरेकै छ । कथम कदाचित भोली न्याय पाईयो भने पनि उठनै नसक्ने गरी मेरुदण्ड भाचेर थला पार्नु भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा बडेमाको अपराध हो । लेखक ढकाल लगायत कसैमाथी यो अन्याय नभैदिए राम्रो हुन्थ्यो । बाकी हिसाब फैसलापछि । भ्रष्टाचार नगरेको भए लेखक ढकालको जय होस । नत्र पाठकका नाताले गर्ने भाटे कारबाही त छदैछ । सर बिद्धान छन ,तर जडयाहा परे,त्यसैले यिनले पढाएको नैतिक शिक्षा पढ्दिन भन्नुमा म त केही दोष देख्दिन ।
Posted bymilanbagale June 21, 2011 Posted inUncategorizedLeaveacomment on रातो पासपोर्टमा ढकालको ‘कालो मसी’
सुनसान वीपी संग्रहालय
संग्रहालय परिसर (तस्वीर— मिलन बगाले)
‘आज मैले मेलमिलापको ढोका खोलें। सुन्दरीजलसग हाम्रो आत्मा जोडिएको छ । ‘
वी पी संग्रहालयको शुभारम्भ गर्दै २०६१ भाद्व २४ गते स्व.गिरिजाप्रसाद कोईरालाले उक्त संग्रहालयलाई मेलमिलापको ढोकाको उपमा दिनुभएको थियो । वीपीले सात बर्ष जेलजीवन विताउनुभएको सुन्दरीजल बन्दीगृह वीपी संग्रहालय बनेको पनि सातै बर्ष पुरा हुन लाग्यो । शुरुवाती बर्षमा निकै चर्चामा रहेको यो संग्रहालय आजकाल ओझेलमा परेको छ । निकै थोरै मानिसहरु त्यो ऐतिहासिक संग्रहालय अवलोकन गर्न आउछन। कोईराला परिवार र अन्य कांग्रेसी जनको कुरै छोडौ, वीपी पुत्री चेतनासमेत यहा आएकी छैनन । चेतनाकी छोरी र श्रीमानले भने संग्रहालय अवलोकन गरेका छन ।
संग्रहालयका अधक्ष्य परशुराम पोखरेलको अग्रसरतामा संग्रहालय पूर्वाधार समितिले लामो समयको प्रयासपछि नेपाली सेनाबाट उक्त बन्दीगृह २०६१ साल भाद्व २२ गते किन्न सफल भएको थियो । त्यसको पर्सिपल्ट नै संग्रहालयको शुभारम्भ गरिएको संग्रहालयका कार्यालय सचिव सुशील पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाका अनुसार सेनाले हस्तारन्तरण गर्दा असाध्यै जीर्ण भवन र वीपीले बन्दी जीवन बिताउदा प्रयोग गर्नुभएको पलङबाहेक केही सामाग्री बचेको थिएन । पछि संग्रहालयमा संग्रहित सामाग्रीहरु परशुराम पोखरेलकै अग्रसरतामा वीपी र उहाका सहयोद्धाहरुका परिवार र शुभचिन्तकहरुबाट संग्रह गरिएको हो । संग्रहालय भवन र परिसर नेपाली सेनाबाट हात पार्न पोखरेल र स्थानीयबासीले लामो समय संघर्ष गरेका थिए । नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापति प्रज्वल शम्शेर जवराले वीपी र उनका सहकर्मीहरुले बन्दी जीवन बिताएको उक्त भवन भत्काउन पाउँ भनी दरबारमा निवेदन समेत दिएका थिए । तर राजा बीरेन्द्वले उक्त भवन भत्काउने अनुमति दिएनन । यसबाट राजा बीरेन्द्वको महानता र दूरदर्षिता झल्किन्छ ।
२०६८ साल बैशाख २२ गते विहीवार दिउसो २ वजे म सुन्दरीजलस्थित उक्त संग्रहालयमा पुग्दा परिसर सुनसान थियो । त्यहाका सुरक्षागार्ड उद्धव कुईकेल वीपीको पूर्णकदको सालिक रहेको बगैचानेर घास उखेल्दै थिए । कामदार चन्द्व तामाङ चाहि अग्लो पर्खालमा सुर्की दल्दै थिए । ‘आज कोही आएका छैनन । यसो फाट्टफुट्ट मान्छे आउछन । कहिले त्यो पनि हुन्न’ कुईकेलले भने । स्कुलका बिधार्थीहरु भने बेलाबेलामा शैक्षिक भ्रमणमा आउने गरेको उनले बताए ।
वीपीसगै जेलजीवन बिताउनुभएका गणेशमान सिङ ,कृष्णप्रसाद भट्टराई , रामानारायण मिश्र, योगेन्द्वमान शेरचन , दिवानसिङ राई र प्रेमराज आङदम्बे सग सम्बन्धित तस्वीर पत्र र अन्य सामाग्री हरु संग्रहालयमा संग्रहीत गरिएका छन । वीपीले प्रयोग गर्नुभएको वेतको कुर्सी र टेबुल संग्रहालयको भेटघाट कक्षमा सजाएर राखिएको छ । भान्छा कोठामा वीपीले प्रयोग गर्नुभएको स्टोभ, चुलेसी, मैनबत्ती स्टाण्ड र स्टीलको डेक्ची राखिएको छ । वीपीले बन्दी जीवन बिताउदा प्रयोग गर्नुभएको पलङ , उहा प्रधानमन्त्री हुदा प्रयोग गनु भएको टेलिफोन, वीपीको अस्तु धातु पाखी, तन्ना, सिमलको तकिया ,कलम, कोट उहा सुत्ने गर्नुभएको कोठा र त्यसैसग जोडिएको अर्को कोठामा राखिएको छ । वीपीले लेख्नुभएका पुस्तक र उहालाई प्रदान गरिएका सम्मान पत्रहरु पनि संग्रहालयमा राखिएका छन ।
गणेशमान सिङले सुत्न प्रयोग गर्नुभएको कोठामा उहा र रामनारायण मिश्रका केही कपडा र जुत्ता राखिएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईको कोठामा उहाले २०६४ साल असोज ९ गते पार्टी परित्याग गर्दै तत्कालिन काग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाई लेख्नुभएको पत्र पनि राखिएको छ ।
वीपीले रोप्नुभएको कपुरको रुख (तस्वीर— मिलन बगाले)
दुर्लभ फोटाहरु संग्रह गर्न सकिएपनि अरु सामाग्रीहरु धेरै संग्रह गर्न नसकिएको कार्यालय सचिव सुशील पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । २४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त संग्रहालयको चार बुर्जामा सुरक्षा पोष्ट रहेका छन । पाच नेपाल प्रहरी र सातजना कर्मचारी त्यहा कार्यरत छन । संग्रहालयको प्रवेशद्धारनेर वीपीले रोप्नुभएको दुईवटा कपुरका बोट छन । संग्रहालय परिसरमा वीपी र गणेशमान सिङको पूर्णकदको सालिक बनाईएको छ ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई, रामनारायण मिश्र, दिवानसिङ राई र योगेन्द्वमान शेरचनको सालिक निर्माण गर्ने योजना बनाईएपनि आर्थिक अभावले काम छिटो हुन नसकेको सचिव पोखरेलले बताउनुभयो । संग्रहालयले वीपी र उहाका उहाका सहयोद्धाहरु सग सम्बन्धीत सामाग्री समेटिएका पुस्तक र पत्रपत्रिका स्रगह गरि पुस्तकालय बनाउने योजना पनि बनाएको छ । यो बर्ष संग्रहालयलाई सरकारले १० लाख रुपैया बजेट छुट्टयाएको पोखरेलले बताउनुभयो । नयापाटी गाविसले भने कुनै सहयोग नगरेको उहाको गुनासो छ । ‘काग्रेसको भन्दा पनि देशैकै सम्पतीको रुपमा यसलाई सबैले लिईदिए हुन्थ्यो’ उहाले भन्नुभयो । बार्षिक लाखौको बजेट पाउने गाविसले घरआगनकै ऐतिहासिक र अन्तराष्ट्रिय महत्वको सम्पदालाई कुनै सहयोग नगरेर अन्याय गरेको स्थानीयबासीको पनि मत छ ।
काठमाडौको नयापाटी गाविसमा रहेका उक्त संग्रहालय रत्नपार्कबाट करिब १२ किलोमिटर उत्तर पूर्वमा छ । गैडागस्ती नामले पनि चिनिने उक्त भवन १०० बर्ष पुरानो हो । संग्रहालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपूर्व सो भवन नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थ भण्डारका लागि प्रयोगमा ल्याएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री हरु पुष्पकमल दहाल र माधव नेपालले प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै संग्रहालयको भम्रण गरेपछि यसको चर्चा अझ बढेको थियो । पुष्पकमल दहालले वीपीको कोट ओलटाईपोल्टाई हेनुभएको खबरले त्यतिबेला निर्क चर्चा पाएको थियो। बर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई स्वागत गर्न संग्रहालय प्रतिक्षरत रहेको सचिव पोखरेलले बताउनुभयो । संग्रहालयको प्रवेशद्धार ( वीपीले जेल जर्नलमा प्रवेशद्धारलाई कालो फाटक नाम दिनुभएको छ ) भन्दा भित्रको दृश्य खिच्न मनाही गरिएको छ ।
कालो फाटक (तस्वीर— मिलन बगाले)
Posted bymilanbagale June 11, 2011 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सुनसान वीपी संग्रहालय
राजधानीभित्रको यात्रा : पाईला -पाईलामा धराप
साझको ६ बज्न खोज्दै छ । बिकास र चेतनाको गति शताब्दियौदेखि बेसोमति पाराले जहाको त्यही ठिङग उभिएपनि समयको गति भने कत्ति रोकिएको छैन । वीरशमशेर महाराजको घडीको लङगुर् त्यै भाकामा अझै हल्लिरहेछ । चारो खोज्न हिडेका चराका हुलदेखि मानो पकाउन र काचो मानो खोज्न हिडेका मान्छेका जुलुस यत्रतत्र हिडिरहेछन । नेतृत्वहीन भीडझै । सबैको साझा लक्ष्य छिटोछिटो बासतिर पुगौ भन्ने छ । कति अघिनै पुगिसके । दृश्य निकै महिना ठगिएर बल्लतल्ल आफ्नो रुप भेट्टाएका गणेशमानजीको दैलाठेला अगाडीको हो । हेमानको बृद्र ज्यानलाई हत्केला भन्दा साना खुट्टाले सकीनसकी बोकेर उभिएका गणेशमानजीको सास्ती आजकाल सकिएको छ । उनको बिरुप मूर्ति हटेर नया चिटिक्कको आएपछि उनको दिनचर्या फेरिएको हो । तर उनको आगन अगाडीको भद्रगोल गतिबिधि भने जस्ताको त्यस्तै छ ।
बागबजार र रत्नपार्क जोडने आकाशे पुल भनाउदो सिमेन्टीको सुरुङ मुन्तिरबाट ग्यासको एउटा हरियो ढुम्रो बिस्तारै रत्नपार्कतिर गुडदै आईरहेछ । काटीकुटी हिटलरकै ग्यास च्याम्बरको झल्को मेटाउने यो ढुम्रो कमलपोखरी, मैतीदेवी, पुरानोबानेश्वरको भाका उरालीरहेछ । सिङ्गो रत्नपार्कको मनस्थिति हेर्दा लाग्छ – यो सेरोफेरो सबै यसैभित्र कोचिन उद्दत छ । र यो ? यो सुरुङ आफ्नो साईज बिर्सिएर सबैलाई भाग पुर्याउन तयार छ । काठका मुढा चाङ लगाएझै मान्छे कोच्दा पनि १२ – १५ वटा भन्दा बढी मान्छे नअटेपछि केही बलिष्ठ हातहरु ढोकातिर झुण्डिछन र कोही झ्यालतिर मुन्टिन्छन् । राक्षसी पेटझै मान्छे खाएर अघाएको यो ग्यासको ढुम्रो (माईक्रो बस ) जडयाहा तालले हल्लिदै अघि बढ्छ । फेरि अर्को हुल गिद्र र चीलले सिनो झम्टिएझै पछि आईरहेको ढुम्रोलाई झम्टिन्छन । एक घन्टाको भिडन्तपछि पनि हातलागी शुन्य भएपछि आजीत मेरो मनले खुट्टाको चप्पल घिसा्रन थाल्छ र बागबजारतिर लम्किन थाल्छ – मैतिदेवी सम्मको बाटो नाप्नको लागी ।
गंगबु – राजधानीको सुदुरपश्चिम
कागजमा गंगबु बसपार्क एशियाकै नमुना बनेको थियो । त्यो कागजी घोडा कागजमै सिमीत रहयो र बन्यो भद्रगोलको उत्कृष्ठ नमुना। यो बसपार्क नानाथरी सपनाको साईज साईज र टाईप टाईपको पोको बोकेर देशैभरीबाट राजधानी भित्रिनेहरुको प्रमुख नाका हो । पचासथरी राज्य कथित मा सयथरी बन्द र नाराजुलुसको मारले ठाउ कुठाउ थलिएर दिउसै भित्रिनुपर्ने बस रातीतिर काठमाडौ आईपुग्छ ।
बसपार्कबाट काठमाडौको सिरिखुरी सेरोफेरो भनेको बढीमा त्यै २० -२५ किलोमिटर हो । तर ७ बज्दा नबज्दै सबै बस र माईक्रो थान्को लागीसक्छन । एकाध टेम्पो बाहेक । गन्तब्यमा पुग्न नपाएर बिच सडकमा थलिएका यात्रुलाई ठग्न हाजिर भईहाल्छन ट्याक्सी र बसपार्कतिरका लज । झापाबाट काठमाडौको ८०० किलोमिटर ७०० रुपैयामा छिचोलेको एउटा यात्रु पाटनको मगलबजार या भक्तपुरको लोकन्थलीसम्मको १२-१५ किलोमिटरको बाटोलाई छ हजार बाह्र सय तिर्न बिबश हुन्छ । गाडी नपाएर । महानगर भनाउदोको यातायात ब्यबस्थाको यो बेथिति ललीतपुरको यातायात ब्यबस्था कार्यालयको भन्दा गएगुज्रेको छ । त्यै लुटाहा ट्याक्सीसमेत नपाएर ८ बजे तनहु बाट गंगबु आईपुगेको म मैतिदेबी पुग्न नपाएर ५०० रुपिया तिरेर गगबुको लजमा सुतेको नमिठो सम्झना मनमा ताजै छ ।
राजधानी काठमाडौमा रात्रीकालीन बस सेवा महानगरले नै चलाएर यातायातको यस्तो ‘हरीप’ चालाको छिट्टै अन्त्य गर्ने महत्वाकाक्षी सपना केही बर्षअघि तत्कालीन मनोनित मेयर केशव स्थापितले सुनाएका थिए । माओवादीले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न स्थानीय निकाय खर्लप्पै खाली गरेपछि मेयरसापको यो महत्वाकाक्षी सपना आजसम्म पनि टर्रो विपनामा परिणत हुन पुगेको छ । र त गंगबुबाट शहर पस्नु सुदुरपश्चिमबाट शहर छिरेजस्तै छ अझै ।
एम्बुसको त्रास र त्रिशुलीमा हेलिएजस्तो सडक यात्रा
पेडेस्ट्रियन राईटछुट्टै साईकलको लेन र संरक्षीत बिश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र यातायात साधन प्रवेश निषेधका कुरा बिगतमा धेरै भए । तर कुनै ‘बरिष्ठ’ ले पनि यसलाई गर्नुपर्ने कामको सुचीमा नै राखेनन । फुटपाथ र साईकल लेनको अभावमा अभागी दुनिया त्रिशुली हेलिएर तर्नेहरुको जस्तो जात्रा भोग्दैछ राजधानीका सडकमा । टाउकोमाथि खस्न ठिक्क परेका बडाबडा होर्डिङ बोर्ड र बाटोमा बेन्चटेबुल नै राखेर ब्यापार गर्नेहरुकॊ भने ट्राफिक प्रहरीले यदाकदा खेदो खन्ने गर्छ । तर जेब्रा क्रसिङ सुधारमा भने उसले फिटिक्कै ध्यान दिएको छैन । खरबारीबाट लखेटिएका बादरले कान्लाकान्ला नाघेर हाम्फालेझै राजधानीमा बाटो काटनुपर्ने स्थिति साच्चिकै डरलाग्दो छ । दुई चार बट्टा सेतो रङ पोतेर ठाउ ठाउमा राम्ररी जेब्रा क्रसिड बनाईदिए र सबैले सभ्य भएर त्रिशुलीमा हेलिएर नदी तरेझै अन्धाधुन्ध सडकमा नहाम्फाल्दिए पाईला पाईलाको एम्बुसको त्रास अलि कम हुन्थ्यो कि थामिनसक्नुको मान्छे र गनीनसक्नु मोटरको हुल कमल थापाकालीन कर्‍फ्यु ब्रेकको त्रासद झल्कोजस्तो लाग्छ ।
मान्छे खसाल्ने बसको कथा
नेपाल देशको नाम सग मात्र होईन काम गराईको पारा सग पनि ठयाम्मै मेल खाने एउटा यातायात बर्षौदेखि राजधानीको सडकमा गुडिरहेको छ । कोटेश्वरबाट बानेश्वर थापागाउ पुतलीसडक हुदै महाराजगज पुग्ने यो यातायात त्यो बाटाकॊ एक्लो महारथी हो । धिरोधत्त नायकजस्तो । चानचुन १७ – १८ फिट लामो यो मोटर मिनभवनतिर रित्तै भेटिएपनि बानेश्वर सम्मेलन केन्द्र कटेपछि सिङ्गो बानेश्वर यसैभित्र पसेझै लाग्छ । दोस्रो भन्दा पछाडितिरका सिटहरु दुरदराजका अनकन्टार बस्तीझै प्रतीत हुन्छन । प्रतिस्प्रर्धी नआउदा चिप्ले किराझै घसि्रने र ढसमस्स बस्याबस्यै गर्ने यो ठाडोलाई पछाडिबाट अर्कोले खेदयो भने यसको हाल बुर्कुसी मार्दै हिडने हरुवा खरायोको जस्तो हुन्छ । चढाउने बेला ठाउ कुठाउ रोक्दै हिडनु र ओराल्ने बेला राम्ररी नरोकी यात्रुलाई खसाल्दै हिडनु यसको सामान्य दिनचर्या नै भईहाल्यो । खलासी भनाउदोको नमिठो बोली ब्यबहार त सदाबहार बिशेषता नै भईहाल्यो ।
नरक यात्राको झल्को
केशवराज पिडालीको ‘शुर विरहरुको नरक यात्रा’ नामक निबन्धको झल्को मेटाउने गरी हरेक दिन पटक पटक गरिने राजधानीभित्रको यात्रा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? पाईला पाईलाको धरापबाट बाचेर घर फिरेको पेन्सनवाला लाहुरेको जस्तो अनुहारको चमक भोलीपल्ट बिहानै गर्नुपर्ने नरक यात्राको सम्झनाले मेरो मन त अघिल्लो साझै भरङग हुन्छ । राको नझोसुन्जेल र सेटीपीन नझिकुन्जेल बम नपडकिएर नाफाको जिन्दगी जिईरहेको आत्मघाती जत्थाको जस्तो जिन्दगी हामीले कहिलेसम्म जिईरहने राजधानीमा ?
Posted bymilanbagale May 23, 2011 Posted inUncategorizedLeaveacomment on राजधानीभित्रको यात्रा : पाईला -पाईलामा धराप
मास्सिदै माटोका दलाल
‘जग्गामा काम गर्छु । तरकारी र च्याउखेती गर्छु । धान चाहि धेरै फल्दैन । भात खानसम्म पुग्छ । तरकारी खेतीले जसोतसो गुजारा चलेको छ । जग्गामा काम गरेर बाच्न गाह्रो भो सर ।’
‘जग्गाको काम गर्छु । पहिला मार्केटिङको काम गर्थे । पसल पसलमा सामान पुर्याउने काम । सात हजार तलब थियो । खानै मुस्किल । एउटा साथीले जग्गाको काम गर्ने आईडिया झिक्यो । अनि त मालामाल । आज पाचलाख आनामा किन्यो । भोलिपल्टै आठ लाख । १०महिनामा मैले साढे तीन करोड कमाए । १ रोपनी जग्गा र ४ तले घर जोडे । एउटा गाडी र ८० लाख रकम बचत छ । अब यो बौलाहा पेशा छोडिदिन्छु । नत्र अलि दिनमै म सखाप पुग्छु । ‘
बिना अर्थ बहुलाएको काठमाडौको घरजग्गाको दलाली ब्यापार आजकाल अलि थामिएको छ । यो खबर सुन्दै गर्दा मैले एक बर्ष अघि भेटेका दुई पात्रको धमिलो याद आयो । आफ्नै जग्गामा खेतीपातीको काम गर्ने काठमाडौका रैथाने नेवार र अर्काको जग्गालाई काक्रोझै चिरेर सुनका टुक्रोको भाउमा बेच्ने राजधानी बाहिरको एक पहाडी जिल्लाका युवक । एउटा दिनरात माटोको पूजा गर्ने अर्का माटोलाई काटने र चिर्ने । जग्गामा काम गर्नेलाई गासकै समस्या थियो भने जग्गाको काम गर्नेको हुलिया रातारात नवधनी बर्गमा फेरिएको थियो ।
काठमाडौको जग्गालाई गत सालसम्म अचम्मको मात लागेको थियो । च्याउ झै खुलेका बैकफाईनान्स र सहकारीले बेस्सरी भाङ धतुरो खुवाईदिएका थिए तेसलाई । बिदेशबाट दुखसाथ कमाएर ल्याएका नेपालीले २ – ४ मुठी माटोमा भएभरको पैसो सबै खन्याए । अनुत्पादक क्षेत्रमा यसरी धन ओईरिएपछि अन्य क्षेत्रको आर्कषण नराम्ररी घटयो र सब दलाली बन्न तम्सिए । नसक्नेहरुले आफूलाई धिक्कारे पनि । ४ पाथी धान नफल्ने र गतिलो ३ कोठे घर नबन्ने जग्गाको दाम एक करोडसम्म पुग्यो । भौतिक पूर्वाधारको कुरो नगरौ । ढल पानी न बत्ती । लुटने लुटिने र लुटाउने तीनैथरि खुशी भएको बिरुप दृश्य हेर्नुसम्म हेरियो । राजधानीको तीन आना माटोको लागि दुनियाले सय मुरी धान फल्ने गैरीखेत मासे । ईरान र अफगानिस्तानका ज्यान हत्केलामा राखेर कमाएको पैसाले दलाल र बैक मोटाए । पोखरा हेटौडा र चितवनमा घर हुनेले समेत काठमाडैमा घरघडेरी जोडन मरिहते गरे । हावा खान नपाईने पानी खान नपाईने र बती बाल्न नपाईने काठमाडौ दुनियाको मेल्टि पट र लाईमलाईट बन्यो । अहिले धानिनसक्नु भएको छ ।
डा बिश्बम्भर प्याकुरेलले काठमाडौंलाई ‘भारी बोक्न नसकेर थला परेको गधा’ को उपमा दिनुभएको छ । प्लटिङ गरि बसाईएका नया बस्तीमा समेत दमकल परै जाओस दुईटा साईकल बारपार गर्न नसक्ने नाम मात्रका बाटा बनाईएका छन । ती बस्ती सयौ बर्ष पुराना असन जस्ता भईसके । असन गाडी गुडन बनाईएको थिएन । गाडा गुडन बनाईएको थियो । नया असनले आगलागी र अन्य प्राकृतिक प्रकोपमा ठुलै समस्या निम्त्याउनेछन । बिग्रदो सहरी सौन्दर्यलाई चाहि धेरैले समस्या ठानेका छैनन । घरको डिजाईन र उचाईको एकरुपता नहुदा काठमाडौका घरहरु चिडियाखानामा थुपारिएका जनावरजस्ता भएका छन । अफि्रकाबाट ल्याईएको जंगली मान्छेदेखि चितवनको गैडासम्म एउटै छानोमुनी । साईबेरियाको हासदेखि काठमाडौको बकुल्लोसम्म । हाउजिङ कम्पनीले स्यानै मात्रामा भएपनि बान्की परेका केही ब्यबस्थीत घरबस्ती बनाईदिएका छन । सहरी सौन्दर्यको महत्व त्यो वर्गले राम्रै बुझेको छ र सकेको योगदान पनि दिएको छ ।
राष्ट बैकले घरजग्गामाको कारोबारमा कडाई गरेर कालोबजारी नियन्त्रणको प्रयास गरेपछि एउटा स्यानो बर्ग र ब्यबसायीको लुटको स्वर्ग सकिएको छ। अर्काको भात खाने टपरी खोसेर सुनको थालमा खान पल्केकाहरु बैकको किस्ता तिर्न नसकेर हैरान छन । तेज महलहरु लिलामीमा चढेका छन । महगा गाडीहरु चार दिवारको कैदी बनेका छन । करनतिरेको प्रमाण रातदिन भेटिदो छ र तिनका नाम कालो सुचीमा चढ्ने क्रम सुरु भईसकेको छ । बैक र फाईनान्सहरु मणी हराएको सर्प जस्ता भएका छन । तिनको स्बभाविक मृत्यु भईसकेको छ । हाटहुट गरेर खोल्ने र लाटलुट गरेर फर्किने धेय राखेकाहरुले किसानलाई उधमीलाई र देश बिकासमा लगानी गर्न खोज्ने हरुलाई गेटबाट छिर्न दिएनन । अहिले तिनका दिन समग्रमा सकिएका छन ।
तत्काल धेरै सन्तोष मानिहाल्नुपर्ने ठाउ पनि छैन । अझै पनि एउटा स्यानो ओत बनाउन जिन्दगीभरिको कमाई खन्याउनुपर्ने बाध्यता सकिएको छैन । कम मुल्यमा घर बनाउने प्रबिधिको बिकास भएपनि त्यसले ब्यापकता पाएको छैन । बिदेशी एनजिओका पाईलट प्रोजेक्टमै सिमित छन लो कस्ट हाउजिङ परियोजनाहरु । माटोको दलाली पेशा पूर्ण रुपमा मास्सीएपछि एकाध बैकले यतातिर पनि लगानी गर्ने आस अझै बाकी छ । आफनै छानोमुनी बास बस्ने सपना पालेका लगभग पचास लाखभन्दा बढी शहरी गरिबहरुको ढिलोचाडो जय होस ।
Posted bymilanbagale May 22, 2011 Posted inUncategorizedLeaveacomment on मास्सिदै माटोका दलाल
लमजुङ जिल्लाको उत्तरकन्या गाविसमा पर्ने घलेगाउ ग्रामीण पर्यटनका लागि आर्कषक गन्तब्यको रुपमा परिचित छ । गुरुङ जातिको बाहुल्यता रहेको यो गाउमा ११२ घर छन । जस्तापाता स्लेट काठ र छरले छाईएका बान्की परेका घरको दृश्यले सबैको मन लोभ्याउछ । गुरुङ जातिको परम्परागत घुमाउने घर यहाको प्रमुख आर्कषण हो । पर्यटकहरु यो घर अगाडी उभिएर फोटो खिच्न छुटाउदैनन । घुमाउने घर यतिबेला तीन वटा मात्र बाकी छन ।
काठमाडौबाट करिब २२० किलोमिटर र पोखराबाट करिब १३५ किलोमिटर टाढा रहेको यो गाउमा मोटरसमेत पुग्न थालेपछि पर्यटकको संख्यामा अझ बृद्धि भएको छ । समुन्७३घण्छसी सतहबाट दुई हजार सोह्र मिटर उचाईमा रहेको घलेगाउबाट माछापूछ्रे अन्नपूर्ण लमजुङ हिमाल र हिमालचुलीको मनै हर्ने दृश्य देखिन्छ । गुरुङ जातिको परम्परागत बास्तुकला सोरठी र घाटु नाच गुरुङ संग्रहालय नमुना चिया बगान उत्तरकन्या देवीको मन्दिर र चराचुरुङगी अवलोकनका लागि यो ठाउ प्रसिद्ध छ ।
अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गमा पर्ने घलेगाउका २९ वटा घरमा होम स्टेको ब्यबस्था छ । सफा र चिटिक्क कोठा बिजुली सफा शौचालय र बाथरुम जस्ता सुबिधा त्यहा उपलब्ध छ । अन्य पर्यटकीय गाउमा भन्दा यहा खानबस्न सस्तो छ । लोकल कुखुराको मासु कोदोको ढिडो सेलरोटी मकैको रोटी स्थानीय आलुका बिभिन्न परिकार गुन्द्धुक र सागसब्जी घलेगाउ बस्दा खान पाईन्छ । काम्लो राडीपाखी गुन्द्धुक सिन्की बास र चोयाले बनेका कलात्मक सामान यहा किन्न पाईन्छ । नजिकै भुजुङ र घनपोखरा गाउ छन । ती गाउ पनि घलेगाउ जस्तै सुन्दर छन । त्यता पनि पर्यटकहरु निकै जान्छन ।
पर्यटकलाई माला लगाएर गाउ भित्र्याउने चलन रहेको घलेगाउमा यतिबेला घलेगाउ महोत्सव चलिरहेको छ । महोत्सव बैशाख २४ गते शनिवारबाट शुरु भएको हो । महोत्सवमा स्वदेशी र बिदेशी पर्यटकको उत्साहजनक सहभागिता छ । आन्तरिक पर्यटकले नेपालमै सबैभन्दा बढी खातिरदारी आत्मीयता र स्वागत पाउने ठाउ सम्भवत घलेगाउ नै हो ।
Posted bymilanbagale May 11, 2011 Posted inUncategorizedLeaveacomment on घुम्नैपर्ने घलेगाउ
झक्कुलाई मन्त्री बनाउ
संविधानसभा चुनावका ‘जायन्ट किलर’ झक्कु सुवेदी दन्त्यकथाको पात्रझै बनेर विगत तीन बर्षदेखि देशको राजधानीमा छन । संविधानसभाको चुनावमा माधव नेपाललाई राम्रै झापड खुवाएका झक्कु स्वयमले तेस्रोपटक वैशाख १९ गते कोटेश्वरका चिया पसले प्रेमराज देवकोटा को झापड खाएका छन । तेस्रो झापडको पत्रिकामा राम्रै चर्चा चलेपनि पहिलो र दोस्रो झापडले भने खासै चर्चा पाएन ।
पहिलो झापड उनलाई उनकै पार्टी अधक्ष्य प्रचण्डले दुई बर्षजति पहिला हानेका थिए । फराकिलो मत अन्तरले हारेर चार दिवारको कैदी बनेका माधव नेपाललाई प्रचण्डले सभासद बनाएपछि झक्कुले गालामा थप्पड खाएको तितो अनुभुती पक्कै गरेका थिए । प्रचण्डको हात समातेर जनताले निषेध गरेको वानेश्वर सम्मेलन केन्दको पर्खाल नाघ्न सफल माधव नेपाल देशको प्रधानमन्त्री बनेर संसदको रोष्ट्रममा उभिएपछि झक्कुले दोस्रो झापड खाए । प्रेमप्रसादको झापड त्यति ठुलो र चर्चायोग्य होईन। झक्कुले पनि यसलाई ठुलो घटना मानेका छैनन । काम गरेन भनेर आफ्नो सभासदलाई यसो झक्झकाएका न हुन देवकोटाले ।
देवकोटाले थप्पड हानेपछि झक्कुका पनि झलनाथको झै ग्रहदशा काटिए हुन्थ्यो । म त झक्कु मन्त्री भएको हेर्न ब्यग्र प्रतिक्षारत छु । माओवादी दुईपटक सरकारमा जादापनि झक्कुजस्ता जनताले छानेका ‘खास मान्छे’ को नाम मन्त्री बन्नेको सुचीमा नदेखिनु लाजमर्दो कुरो हो । झक्कु सायद गुटबन्दी जान्दैनन होला । जमानामै रोल्पाको जिविस उपसभापती मा सान्दार भोट ल्याएर निर्वाचित भएका झक्कलाई घटीमा स्थानीय विकास मन्त्री वा त्यो भाग नपुगे राज्यमन्त्री बनाईदेउ न ए प्रचण्ड प्रभु । हारेको मान्छे प्रधानमनत्री भएको दृश्य २० महिनासम्म टुलुटुलु हेरेका नेपाली मान्छे जितेको र तीन पटक झापड खाएका झक्कु मन्त्री भएको हेर्न रहर गरिरहेछन । आगे माओवादीका नानाथरी गुट र प्रचण्ड प्रभुको जो ईच्छा ।
Posted bymilanbagale May 7, 2011 Posted inUncategorizedLeaveacomment on झक्कुलाई मन्त्री बनाउ
हल्लाखोरे समाचारमाध्यमको देश
‘जन्मिएका मान्छे’ भूपी शेरचनलाई नेपाली खबरकागजका खेलाडीहरुले बेलाबेलामा राम्ररी सम्झाईदिन्छन । हामीले उनलाई बिर्सिन्छौ कि भन्ने भयले होला । छापाले कागको पछि लागेर हाम्रो कान उडाएको सयौ घटना छन । अनुजा बानिया सम्म आईपुग्दाको हल्लाखोरे परम्परालाई टुलुटुलु हेरिबस्दा मैले एकाध बिगत सम्झे ।
रसेन्द्व भट्टराय संसारकै सबैभन्दा धनीमध्ये एक भन्दै एकताका ठुल्ठुल्ला हल्ला छापेर घरघरै बाडे । टिभिको रंगीन पर्दामा भ्रमको ठुलै झल्झलाकार पोको पनि आखाले देख्न पाएको हो । ‘जर्ज बुस मेरो साथी हो, बिल गेटस भाईजस्तै हो । ५ -७ वटा मेरा निजि हावाजहाज छन १० -१५ वटा बंगला छन १०० भन्दा बढी देशमा ठुल्ठुला ब्याबसाय छ ‘, यस्तै ठुल्ठुला प्रलाप उनको मुखबाट सुनेर दङ परिएको थियो । पछि हिस्स परियो । दुई छाक पेटभर खान सक्ने बाहेक अर्थोक हैसियत नभएका भट्टराय हल्लाखल्ला मच्चाएको अलि दिनमै फुस्स मरेपछि समुन्द्वको ज्वारभाटा शान्त भो । काठमाडौमा होटेलमा बस्दाको पैसोसमेत नतिरेको कुरो पछि तिनैले लाज पचाएर छापे ।
डा भक्तमान श्रेष्ठलाई ‘माओबादीले बाग्लुङ पुर् याए ‘ भन्दै २०६७ साल जेठ १८ तिर एउटो छापाले कथा लेख्यो । त्यसको भोलिपल्ट म काम बिशेषले पर्वतको नयापुल पुगेको थिए । मेरी आम्मै पुलिस त भक्तमानलाई खोज्ने नाममा दुनियालाई भुक्तमान बसाउदै थियो । सबैका घरतिर खोतलेर हैरान । गाडी पुरै टक्टकाए । मेरो झोला समेत खोतल्न थालेपछि झोलाभित्र यतैका खगेन्द्व थापा त अटाउदैनन भक्तमान लाई के खोज्नुहुन्छ भन्दै एक राउण्ड डाईलग मारेको थिए । समाचार पढेर कार्टुनिस्ट मित्रले ‘आकाशभरि डम्मै बादल लागेर केही देखिएन’ भन्दै डेढ अक्कले कार्टुन बनाए । बरा बादलले मैले अपहरण गरेको छैन उनी मेरा साथी हुन भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा रोईकराई गरे । पत्रिकाले भक्तमानलाई वाग्लुङतिर डुलाईरहदा उनलाई भने अपहरणकारीले सिमा कटाईसकेका थिए । कुरो छर्लङ भएपछि पत्रिका तथा पढेर अनेक अडकलबाजी गर्ने हामी हुस्सु भएका थियौ ।
सुजाता कोईराला का बंगलादेशी ज्वाई रुवेल चौधरीलाई पनि मिडियाले रातारात हिरो बनाए । पारस त मिडियाका लागि सदाबहार गुण्डा भईहाले । फुलबुट्टा भरेर उभ्याईएका पपेटका कथा पनि एकरातमै बासी भए । पत्रकार दाईदिदिहरुले लेख्या ति कथा गुहु मिल्काउन, मसला र अण्डा पोको पार्न र चना चटपटे खानमै सिमित भए । पछि तिनीमध्येका एकाध असलले कल बाईपास देखि एपीसी खरिदसम्मका काला कथा छापेपछि डा सुजाताका ज्वाई डा रुवेल चौधरी रातारात नेपाल छोडेर भागे । यो कथा सकिएपछि मिडिया अर्को काग खोज्न हिडे ।
गतसाल अग्नी एयरको डोर्नियर जहाज मकवानपुरको शिखरपुरमा दुर्घटना भएपछि त्यो जहाजका क्याप्टेन लक्ष्मणबिक्रम शाह लक्कीलाई ‘तीस बर्ष उडान अनुभव भएको पाईलट’ भन्दै सबैजसोले उडन्ते खबर छाप्याछाप्यै गरे । त्यसो छाप्नेहरुले शाहको जन्म सन् १९६६ मा भएको भनेर छाप्न पनि फिटिक्कै छुटाएनन । निधन भएको दिन ४४ बर्ष पुगेका पाईलटले ३० बर्ष जहाज उडाएपछि उनले १२ बर्षतिर पाईलट पढन थालेका र १४ बर्ष नटेक्दै जहाज उडाउन थालेको कुरो बुझिन्छ । त्यसो हुनु म त सम्भव देख्दिन ।
भारतिय कलाकार ऋतिक रोशन नेपालीले कहिल्यै भुल्नै नसकिने नाम हो । नेपालसग गोरु बेचेको साईनोसमेत नगासेका उनले नेपाल मन पर्दैन भनेको हल्ला हावामा के फिजिएको थियो नेपालीको कथित राष्ट्रियताको खाडो जागिहाल्यो । अरु शुरु भयो नेपाल बन्दको कथा। घरका भित्तामा टासिएका उनका फोटादेखि टायरसम्म केही बचेन । चार जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाए ।
अन्नपूर्ण नामको पाचतारे होटेलमा एकमात्र कोठो छैन । त्यसो त एउटा मात्र कोठो भएको होटेललाई पाचतारेको टाचा मारिएको रेकर्ड संसारमा कहिकतै छैन । होटेल परिसरको छुट्टाछुट्टै भवनको छुट्टाछुट्टै पार्टीमा केही समयको अन्तरमा भुतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्व र उपेन्द्व यादव महन्थ ठाकुरहरु के पसेका थिए ,पत्रकारले हावामा कलम चलाईहाले । भोलिपल्टको छापामा भुतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्व र उपेन्द्व यादव महन्थ ठाकुरहरु वीच भेटघाट भएको र गणतन्त्रको पराले खुट्टालाई गम्भीर धक्का लागेको सुनामीयुक्त खबर घरघरै आयो । धन्न असल सम्पादकले भोलिपल्ट गम्भीर गल्ती भएको भन्दै माफ मागेर सबैको मुखबुजो लगाए ।
पत्रिकाको समाचार र टिप्पणी पढेर आफ्नो धारणा बनाउने सोझा र फुस्रदिला राष्ट्रपतिलाई यतिबेला मिडियाले मुर्ख बनाएका छन । बन फडानी भएको खबरको कटिङ फाईल बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई दिएर फडानी रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका उनले अलिअघि डा तीर्थबहादुर श्रेष्ठको लेख पढन चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरेका थिए । मिडियाप्रति सधै सकारात्मक राष्ट्रपतिले अनुजाको खबर पनि उत्पात पत्याए र अनुजा नानीलाई फोनबाट बधाई दिए। डा यादब अलि पहिला युनिटी पिडित भएका थिए अहिले पत्रिकापिडित भएका छन । युनिटिले छक्याएपछि कसैको कार्यक्रममा जान्न भन्न भ्याएका यादवले अब कसैका पत्रिका पढदिन भन्न बेर छैन ।
समाचार छाप्न भन्दै च्याउसरी उम्रेका नेपाली समाचार माध्यमले हल्ला होईन साच्चैको समाचार छाप्ने दिन ढिलोचाडो आउला नै । आत्तिईहाल्नु पर्ने कारण छैन । समस्या पत्रिका पढेर र खबर हेरेर सुनेर धारणा बनाउने फुस्रदिला मान्छेलाई मात्र हो । पढेपछि कागजसगै समाचारको कुरोलाई पनि डस्टवीनमा फाल्नेहरु र सुनेपछि अर्को कानले उडाईदिईहाल्ने बिन्दासहरु यस्ता हल्लाखोरे खबरबाट फिटिक्कै पिडित छैन । समस्या डा यादबहरुको मात्र न हो ।
Posted bymilanbagale April 23, 2011 Posted inUncategorized1 Comment on हल्लाखोरे समाचारमाध्यमको देश
नरबहादुर जेठाबा : भुईचालोदेखी कम्युनिष्टसम्म
(पाटन दरबार क्षेत्र नजिकको झटापोल टोलमा छानो भत्केको एउटा चारतले घर छ ।त्यो घर नेपाली कम्युनिष्टका छानोजस्तै बनेका नरबहादुर कर्माचार्यको हो । नब्बे सालको भुईचालोमा पुरिएर पनि बाचेका कर्माचार्य जेठाबाको बाल्यकालदखि कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्दा सम्मका अनुभव । उनकै शब्दमा )
म १९८१ साल कार्तिक १४ गते भाईटिकाको दिन जन्मेको । नब्बे सालको भुईचालोबारे राम्ररी याद छ । त्यतीबेला म नौ बर्षको थिएँ । म र माईलो भाई चोटामा गुच्चा खेल्दै थियौ । यत्तिकैमा हल्लाखल्ला गरेको, बुरुरु माटो झरेको र घर भत्कीएको आबाज आयो । म आत्तिएर बाहिर निस्कें । चौरतिर दौडदै गर्दा आडैको घर हेर्दाहेर्दै ढल्यो । म ईट्टा र माटोले छपक्कै पुरिएँ । मलाई कतै नदेखेपछि सानीमा आत्तीनुभो र मलाई खोज्न थाल्नुभो । मैले ‘हजुर हजुर’ भने । तर कसैले सुने पो !
मलाई नदेखेपछि ठुलोबा पनि खोज्न निस्कनुभएछ । मलाई सपना हो कि बिपना छुटयाउनै गार्हो भईरहेको थियो । यत्तिकैमा पल्लो चोकको महाबीर चौरतिर आउदै गर्दा ममाथी टेक्न पुगेछ । म आत्तीएर चिच्याएँ । मान्छे पुरीएको भन्ठानेर उसले यसो एकदुईटा ईट्टा पन्छाएर हेरेपछि मेरो टाउको देखेछ । त्यसपछि सबैजनाले खोसि्रएर निकाले । मेरो टाउकोमा चोट लागेको थियो । जीउ दुखिरहेको थियो । जेठाबाहरुले बोकेर बीर हस्पताल लानुभो ।
बीर अस्पताल घाईतेले भरिएको थियो। देख्दै डरलाग्दो । मेरो टाउकोमा पाचवटा टाका लगाए । उपचारपछि घाईतेलाई तीनधारा पाठशाला नजिकको चौरमा क्याम्प हालेर राखेको थियो । भोलिपल्ट बीर अस्पताल नलगेर मेरो मामाघरको बाजेले लौनचौरमा गोराहरुले खोलेको मिसन अस्पताल लानुभो । म कम्मर दुखेर हलचल गर्न नसक्ने भएको थिएँ । उनीहरुले बडो अचम्मको औषधी सिफारिश गरे । कम्मर र हड्डी भाचिएको छैन भन्दै दुखेको निको पार्न रक्सी र अण्डाको पहेलो भाग फिटेर दिनको तीन पटक खान भने । त्यसै गरियो । टाका लाएको टाउकाको घाउ १२ -१३ दिनमै र कम्मरको चोट २० -२२ दिनमा निको भो ।
नौ बर्षको उमेरमा मामाघरको बाजेले दरबार हाईस्कुलमा भर्ना गर्दिनुभो । म त्यहा ६ कक्षासम्म पढें ।बाजे असाध्यै रुखा र कडा । पढन बस्दा उनी छालाले मोरेको कोर्रा लिएर बस्थे र पढेन भने हिर्काईहाल्थे । पाटन स्कुलमा सात कक्षादेखी म्याटि्रकसम्म पढें । पाटन स्कुलमा पढदा पुष्पलाल मेरा सहपाठी थिए । पुष्पलाल धेरै टाठा र राजनिती बुझेका मान्छे थिए ।
मभित्र राजनितिक चेत घुसेकॊ १९९७ सालमा दशरथ गंगालाल शुक्रराज र धर्मभक्तलाई मृत्युदण्ड दिएको आफ्नै आखाले देखेपछि हो । चारै जनालाई मृत्युदण्ड दिएको हेर्न म पुगेको थिएँ । पहिला मचलीमा शुक्रराजलाई झुन्डयाएको हेर्न गएथें । पछि धर्मभक्तलाई मारेको हेर्न सिफल गईयो । हेर्दाहेर्दै आठपहरीयाले घेरिएका नरशम्शेरमाथी भीडले ढुंगा हान्यो । राणाशासन बिरुद्ध यो डरलाग्दो र रहरलाग्दो प्रतिरोध थियो।
धर्मभक्तलाई झुन्डयाएको बेला अलि अध्यारो थियो । मलाई कसैले तपाईलाई राणाहरुले यसरी मान्छे झुन्डयाएर मारेको कस्तो लाग्यो भनेर सोध्यो। ‘जाबो पर्चा छरेको निहुमा यस्तरी मारेको निको लागेन’ भनें । तपाईहरु जस्तो नबयुबक अब राणाबिरोधी आन्दोलनमा लाग्नुपर्छ उनले हौस्याए । मैले हेरौला मात्र भनें । तर उनले मेरो दिमागमा राजनितिको झिल्को रोप्दीसकेका थिए। त्यो कुरो मेरो राजनितिक जीबनको पहिलो पाठशाला थियो क्यार । गंगालाल र दशरथचन्द्रलाई मृत्युदण्ड दिएको बेलामा पनि हेर्न गए । अलिकती पिडा र अलिधेरै आक्रोश ,त्यस्तै अनुभुती भएथ्यो।
यसको अलिदिन पछि एकजना नचिनेको मान्छे भेटन आए । तिनको नाम भैरबगोपाल बैध रैछ । उनीहरुले प्रजातन्त्र संघ नामको पार्टी खोल्या रैछन । सदस्यता लिनपरो भने । मैले बिना आनाकानी हुन्छ भनिदिएँ । त्यसको पर्सिपल्ट मेरो काका र मलाई २ जना मान्छेले साझतिर पाटन स्कुलको पछाडी लगे। सदस्यता पाउन असाध्यै गारो। कति सुरो रहेछ भनेर जाच्न म र मेरो काकालाई एक एक वटा छुरी दियो र चिरेर रगत निकाल भन्यो । मैले तिघ्रामा चिरेर बेस्कन रगत निकाले काकाले हातमा चिर्नुभो । भएन रे ए गाठे ! सदस्यतै दिएन । भएन ! बाघै मारेर ल्याउ पो भन्छन । हामी आटिला थियौ । हुन्छ भनिदियौ । देबेन्द्रलालको राईस मील थियो । त्यहाबाट फलाम निकालेर कामीलाई छुरा बनाउन दियौ । उसले तत्काल बनाईदियो । छुरा बोकेर बाघ मार्न गोदाबारी जंगलतिर लाग्यौ। दिनभर चहारियो तर बाघ भेटिएन । बाघ भए पो भेटिनु गोदाबरीमा?
निरास भएर साझ फर्कियौ । भेटिएन भन्यौ पार्टीबालालाई । लौ त्यसोभए गाई या साढे मारेर ! ल्याउ फेरी डरलाग्दो उर्दी आयो । फसाद गाई या साढे मारे त मान्छे मारेबराबर सजाय हुन्छ । अब के मार्ने ? आईडिया आयो- घोडा मार्ने।नागबहालको चौरमा सेता घोडा दुबो चरिरहेको देखिन्थ्यो । एक रात म र काईलाबा घोडा मार्न हिडयौ । पार्टीका मान्छेले हेरिरहेका थिए । म घोडामाथी चढें । र याल बेस्कन समाते । काईलाबाले छुरीले पिठयुमा बेस्कन हाने । जाबो छुराले हानेर घोडा के मर्थ्यो, हि हि……… गर्दे भाग्यो । तर हामीले पार्टीको सदस्यता पायौ ।
अब मिटीङमा बोलाउन थाले । मिटीङ रातीराती हुन्थ्यो । कहिले स्बयम्भुको जंगलमा कहिले पशुपतिको मसानघाटमा । अनुशासन अति कडा । न चाडो पुग्नहुने न ढिलो । संस्थापक सातजना थिए – सुर्यबहादुर भरतबहादुर, पुष्पलाल, शभ्भुराम, गंगालाल हलुवाई भैरबगोपाल र कामांक्षदेबि। यिनीहरुलाई सप्तऋषि भनिथ्यो । मिटीङकै क्रममा मलाई एकदिन गुहेश्बरीको जंगलमा सेन्ट्री राख्यो । खुकुरी दिएका थिए । कसैले आएर हातमा चार लेखिदिए भित्र जान दिनु नत्र छप्काईदिनु यस्तै आदेश थियो । आएर चार लेखिदिएन भने कसरी छप्काउनु मान्छे ? म निकै आत्तिएको थिएँ । धन्न एकैछिनमा आएको त्यो मान्छेले हातमा चार लेखिदियो । अनि मैले मान्छे काटने पाप गर्न परेन।
१९९८ सालमै मैले साम्यबादको सन्देश किताब पढिसकेको थिए । त्यो किताब पढनेहरु आफुलाई कम्युनिष्ट भन्न थालीसकेका थियौ। प्रजातन्त्र संघको काम जारी थियो । मिटीङ गर्दै २ बर्ष बित्यो। त्यसपछि पार्टीको माथिल्लो तहमा झगडा पर् यो र पार्टी थला पर् यो । बोलाउन पनि छोडे । अब हामी क्रान्तिकारी गीत गाउदै हिडन थाल्यौ । भजनतिर एक दुई टुक्रा मिसाएर गाउथ्यौ । केही गीत यस्ता थिए-
२००४ सालमा पार्टीबाट फेरी खबर आयो सत्याग्रहमा जानपरो भनेर । किर्तिमान म देबलाल हलुवाई र चन्द्रशेखर राजबंशी आदि शंखमुलको हनुमान मुर्तिलाई ढोग्दै जय महाबीर भन्दै हिडयौ ।सुन्धाराबाट महाबौद्ध हुदै पाटन पुग्दा पुलीसले समात्यो । हामीसग लगभग ५ सय मान्छे भईसकेका थिए । ठाना पुर्याएर बरन्डामा राखॆपछि मैले भिडतिर फर्केर भयानक भाषण गर्न थालें। त्यो जिन्दगीको पहिलो भाषण थियो ।
एक घन्टापछि महाराजगंज लग्यो । त्यहा सख्खर र चिउरा खान दियो । खान्न ! भन्यौ । त्यसपछि मोहनशम्शेरको गारतमा लग्यो । हामी ३९ जना थियौ। चारजना महिला पनि थिए – साहना साधना सुनयलता र पुष्पलता । सात दिनपछि प्राईममिनिष्टर पदमशमशेरकोमा लगे। हामीलाई मृगेन्द्रशम्शेरले सोधे – ‘के हो यो तिमीहरुको नागरीक अधिकार भनेको’?टंकबिलाशले अग्रेजीमा फटाफट उत्तर दिए – ‘प्रेस फ्रीड्म ,फ्रीड्म अफ एसोसिएसन एण्ड फ्रीड्म अफ एडुकेशन ‘! ।अग्रेजीमा उत्तर सुनेर राणाहरु झस्के । सोझा पदमशम्शेरले ‘घर जाओ तिमीहरुको माग १२ दिनमा पुरा गर्छौ’ भने । फर्किदै थियौ, नजिकैको घरमा बिराटनगर जुट मिलबाट समातेर ल्याएका गिरिजाबाबु मनमोहन तारिणी आदिलाई देख्यौ। तिमीहरुको माग के ? मनमोहनले उताबाट कराएर सोधे। यताबाट तीर्थरामले जबाफ दिए। त्यसपछि तिनीहरुसग किन बोलेको ? भन्दै आठपहरियाले म लगायतलाई बन्दुकको कुन्दाले बेस्कन हान्यो । २ – ३ जनालाई फेरी समात्यो र जेल हाल्यो ।
राजधानीमा आन्दोलन चलिरहदा बनारसमा राष्ट्रिय काग्रेसको सम्मेलनले डिल्लीरमण रेग्मीलाई सभापती चुनेको थियो । काठमाडौ जेलमा रहेका बिपीलाई यो मन परेन । डा लोहिया र जयप्रकाशको दबाबमा उनी छुटे र ईन्डिया गए । उनको रेग्मीसग झगडा भयो । पुष्पलाल काग्रेसको कार्यालय सचिव थिए । राणासग भिडने बेलामा आपसमै भिडन थालेपछि हामीले नेतालाई मिल्न दबाब दिने उदेश्यले प्रजापन्चायत नामको सस्था खोल्यौ । दशैका टिकाको दिनबाट आन्दोलन शुरु भयो । हाते पर्चा फालियो भाषण गरियो । सरकारले दमन गर्न थालेपछि यहा काम गर्न गारो भो । म र तुलसीलाल अमात्य प्रवास हिडयौ। रातारात हिडेर परवानीपुर पुग्यौ। अनि त्यहाबाट सिधै रक्सौल।
रक्सौलमा हामी आशालालकोमा बस्यौ । त्यतातिर पनि राणाले जासुस छोडेको सुनेपछि तुरुन्तै बोर्डर क्रस गर्यौ । पार गर्नासाथ हामीले सडकमा नेपालपुकार बेचिरहेका गणेशमानलाई देख्यौ । उनले चिनीहाले र कांग्रेसको अफिसमा लगे। उनले डिल्लीरमण रेग्मीकोमा पठाए । बनारसमा पार्टीभित्रको झगडा मिल्ने लक्षण देखिएन । हामी दिक्कै भयौ।
डेढ महिना पटना बनारस कलकत्ता गर्दैमा र सुबर्ण सुर्यप्रसाद रेग्मी गणेशमान मात्रिकाहरुसग बार्ता गर्दैमा बित्यो । तर अन्तरद्धन्द घटाउन सकिएन । गफकै सिलसिलामा एकदिन त्यहा जातियताको बिषयमा झगडा भयो । डिल्लीरमणहरुले राणाहरुलाई पोस्ने पाल्ने शासन टिकाउने कामगर्ने नेवारहरु हुन भन्दै ब्यापक बिषबमन गरे । उनले रक्तमानकाजी र मरिचमानकाजीको नाम लिएर सबैलाई हिलो छ्यापे। माईला साईला गुरुज्यु र बडागुरुज्युको नाम लिदै जुजुभाईले पनि जैशीले गर्दा राणा र देश दुबै बिगि्रयो भने । रेग्मी आगो भए। मेरै घरमा बसेर मेरै भात खाएर त्यसो भन्ने भन्दै राक्किए । उनले आफुलाई रुपमा पेश गर्न खोजेपछि भेडोको पनि रौ सेतो हुन्छ ठुलाकुरा नगर्नुस भन्दै मैले चुप लगाए । रेग्मीलॆ हेपेपछि जुजुभाई रीसले आगो भएर उठयो र रेग्मीलाई पिटन तम्सीयो । सबैले रोकेपछि सम्हालियो तर रातभरी रोईराख्यो।
भोलीपल्ट मलाई अचानक कलकत्ताबाट तुरुन्त आउनु भनेर पुष्पलालको तार आयो।पैसा थिएन रेग्मीलेनै १५ रुपिया दिए । अनि जसोतसो कालाप्रेस अर्थात कागे्रसको अफिस पुगे । पुष्पलालले कृष्ण सिनेमा हल जाने र नेपाल कमनिष्ट पार्टी खोल्ने योजना सुनाए । मैले सहर्ष स्बीकारे । म्ाभित्रको कम्युनिष्ट फेरी अचानक जागेर आयो । त्यसपछि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कमरेड बेदीले लगातार चार दिनसम्म प्रशिक्षण दिए । हामी चारजना खाट्टी कमनिष्ट बन्यौ ।
अब पार्टीघोषणा गर्ने कुरा आयो । सबैलाई लेनीन डे का दिन घोषणा गर्नु उत्तम लाग्यो र त्यसै ब्यबस्था मिलाईयो । श्यामबजार एरियामा क। पंकजकुमारको डेरामा भाकपाका नेता २२ अपि्रल १९४९ का दिन दिउसो एक बजे हातले लेखेर ल्याएको पार्टीको घोषणापत्र पुष्पलालले २ पटक पढेपछि हामी चारैजना – पुष्पलाल म निरन्जनगोबिन्द बैध र नारायणबिलास जोशीले हावामा मुक्का उचाल्दै घोषणापत्र एकमत र एकमनले पारित गर् यौ । पार्टी जन्मेको खुशीयालीमा हामीले त्यही एउटा अण्डा पाउरोटी र एक कप चियाको भोज खायौ । भोलिपल्ट सबैजसो पत्रिकामा समाचार आएपछि र बाटैभरी पर्चा समेत छरिएपछी निकै चर्चा र हल्लाखल्ला भयो । त्यो खुशी म शब्दमा ब्यक्त गर्न सक्दिन ।
Posted bymilanbagale April 23, 2011 Posted inUncategorizedTags:http://sabdachittra.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html1 Comment on नरबहादुर जेठाबा : भुईचालोदेखी कम्युनिष्टसम्म
दुई महिना यसो गरौ
संबिधान बन्ने दिन घर्किदो छ । सभासदलाई चर्पी उदघाटन गर्दैमा फूसर्द छैन । कोही बिदेशतिर डुल्दैछन । अरुलाई नडुल्न अर्ति दिदै हिडने सुवास हेडसरले पचहत्तर जिल्लाभरि रिबन काट्न भ्याईसके रे । ठुल्ठुला नेतालाई भएभरका रिसोर्ट डुलेर जिब्रो फेर्दैमा फुसर्द छैन । जनतामा निराशा र आक्रोश बढदो छ । भुत पे्तहरु अध्यारोमा सल्बलाईरहेछन । तिनका भाडामा खिचडी पाक्दो छ । सबैतिर अध्यारो छ । तर अन्तिम उपाय बाकी छ । नया संबिधान जेष्ठ १४ भित्रै बनाउने हो भने मसग अन्तिम आईडिया छ ।
बानेश्वर सम्मेलन केन्द्धभित्र खुला ठाउ जति भने नी छ । चाईनिजले सोचबिचार गरेरै बनाएको छ सेतो घर । त्यहाभित्र पाल गाडन कुनै समस्या छैन । भान्छाको पाल पाचवटा बनाऔ । गोदावरी रिसोर्ट ,धूलिखेल रिसोर्ट, सोल्टी, होटेल याक एण्ड यति र हायात होटेलका भान्छे नै ल्याएर त्यहा पाक्ने सबै परिकार पालभित्रै पकाईदिउ । यति भएपछि नेतालाई जिब्रो फेर्न दशतिर डुल्नै पर्दैन ।
सभासद सुत्न ६०१ पाल र सभासद नभएका अरु ठुला नेताका लागि ५० जति पाल गाडौ । युएन ह्यावीट्याट गुहार् यो भने यति काम २ – ४ रातमै काईदाले सिध्याईदिन्छ । स्वाथ्य शिविर पानी शौचालय कापी कलम पि्रन्टर कम्प्युटर पत्र पत्रिका हजाम फोटो खिच्ने पत्रकारको टोली जे जे चाहिन्छ पुग्दो गरि राखम ।
राष्ट्रपतिलाई शीतलनिवासमै ठिक छ । तर भिडियो कन्फरेन्समार्फत भित्रका छलफलमा यिनलाई नी सहभागी हुने ब्यबस्था मिलाऔ । उपराष्ट्रपतिलाई चाहि काईदाको हक्का किन्दिउ। तमाखु खाएरै बसुन ती । टुडिखेलमा गएर हुक्का तान्नेलाई यही उपचार ठिक छ । सब बन्दोबस्त बलियो भएपछि चार वटै गेटमा बडेबडे भोटेताल्चा ठोकौ । सशस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरी नेपाली सेना नागरिक अगुवा र जनताले पालैपालो २४ घण्टे पहरा दिउ । बाहिरबाट बेला बेलामा शंख ,घण्ट ,ढोलक ,ट्याम्को, ढ्याङगो जे जे भेटिन्छ बजाएर तिनलाई खबरदारी गरिराखौ । लेकतिरबाट केहीथान काईदाका भोटेकुकुर झिकाएर झुकाउनु पनि जाती होला ।
जेठ चौध सम्म भित्रको चरो माखोलाई फिटिक्कै निस्किन नदिउ । दिनको अठार घण्टा घटिमा काम गर्नुपर्ने कडा नियम बनाउ । जेठ चौध आउन आटेपछि गेटबाहिर ६५१ माला र ६५१ हत्कडी तयारी हालतमा राखौ । संबिधान बनाएर लागु गरे भने माला लगाएर गतिलो स्वागत गरौ । गाड कोराकोर गरेरै महिना बिताएर रित्तो हात निस्किन खोजे भने सबैलाई हत्कडी लगाएर सभासद भईखाएको ३ बर्ष बराबरकै समय भद्धगोल जेलमा लगेर हालौ । ति ५० जना ठुला नेतालाई नी सभासदसगै जेल हालौ । कसैले जेलभित्रै आएर पसेर पेस्तोल ताकेछ भने पनि ठिकै छ ।
राष्ट्रिय फटाहाजति सबैलाई जेल हालेपछि नया सरकार नागरिक समाज पेशाकर्मी र बुद्धिजीवी मिलेर चलाऔ । सबैजसो मुद्दालाई जनमत संग्रहमार्फत हल गरेर नया संबिधान जारी गरौ । यसो गरे खास्सा हुन्छ ल । संासद मित्र, हत्कडी लाउने कि माला? आगे तपैहरुकै ईच्छा ।
Posted bymilanbagale March 26, 2011 Posted inUncategorizedLeaveacomment on दुई महिना यसो गरौ
मन्त्रीलाई गाडी हैन ‘गोरुगाडा ‘
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाका बिज्ञानमन्त्री पुरेत ईन्द्धप्रसाद ढुंगेललाई ‘ गाडी बुझाउ प्रभो !’ भन्दै गृहका निरीह कर्मचारीले हजारपटक रोईकराई गरे । तर पुरेत टसको मस भएनन् । जनताको छातीमा टायर कुदाईराखे । दुर्घटनामा डल्लो परेपछि भने भने पुरेत बाजेले गाडीलाई गौशालामा फालिदिए । सरकारले पचहत्तर हजार खर्चेर चल्न हुने बनाएको छ ।
‘गाडी फिर्ता माग्न आउने तिमीहरु को हौ? म एक दुई तीन गाडी फर्काउन्न । फर्काउन बाध्य पारिन्छ भने गाडीलाई त्रिशुलीमा फालिदिन्छु । ‘ यो महावाणी पनि माधव सरकारकै माननीय वाणिज्य राज्यमन्त्री सरोज यादवको हो ।
थोत्रो गाडी दिएको भन्दै माधव क्याबिनेटकै खेलकुद सहायक मन्त्री चन्दा चौधरीले बिच सडकमा आफु चढने गरेको गाडीको सिसा फोडेकी थिईन् । गाडीलाई लात्तै लात्ताले भकुरेकी समेत थिईन् उनले । उनको तमासा देखेर दुनिया तीनछक्क परेको थियो ।
राम्रो गाडी दिएन भन्दै सिडियो कुटने उदण्ड मन्त्री करिमा बेगम साहिबाको के कुरो गर्नु ?
पुराना गृहमन्त्री भिमबहादुर रावल पनि राम्रो गाडी लिएर हिडे, मन्त्री प्रम जानुभन्दा केही दिन अघि आफैंले छानेर, किनेर ।
माननीय बिजय गच्छदार हार्न जानेका छैनन । त्यसैले त’ डेरा पाईन ‘भन्दै अझै मन्त्री क्वार्टरमा ढसमस्स बसेका छन । तुरुन्तै उपप्रधानमन्त्री भईहाल्ने सपना छ उनको । अनि किन सर्ने झन्झट बेसाईरहनु ? घर नछोडनेले जाबो १ करोडको गाडी छोडने कुरै आएन ।
गाडी फिर्ता लग्यौ भने बाटोमै लम्पसार परेर मर्छु भन्दै गाडी अगाडी रुमाल ओछयाएर सडकमै सुतेका श्यामसुन्दर गुप्तालाई तपाईहरुले बिसर्नुभो ? ‘प्राण जाला पजेरो नजाला ‘भन्ने बाणिज्य मन्त्रीलाइ मैले कसरी बिर्सनु ?
चोरीको गाडी चढेको अभियोग लागेका खडगबहादुर ‘प्रकाण्ड’ यतिबेला पर्यटनमन्त्री बनेका छन । जनताका पुलिस रमेश खरेलले समातेको गाडीलाई खरेल बिदामा बसेको भोलिपल्टै पुलिसभित्रका ‘चुलबुल पाण्डे’ हरुले फिर्ता दिएका थिए ।
कुनै बेला गाडा चढने दुखियालाई समेत सामन्त देख्ने नेकपा सर्बहारा को मुख्यालय पेरिसडाडो गाडीको सोरुमजस्तो देखिन्छ । जाबो एक दुईटा गाडी पाल्न नसक्ने पनि माओबादी नेता हुन्छ ? प्रचण्डले पनि बुढानिलकण्ठका ब्यापारी राजु श्रेष्ठको गाडी लुटेरै चढेका थिए । पछि श्रेष्ठ आफैले गाडी खोसेर लगे । अनाहकमा लुटिएपछि क्यार्नु त बरा!
दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित चढेको जीपलाई समेत छोडेनन बल्खुका गाडीप्रेमीहरुले । ईतिहासको दुर्दिन सम्झाउने त्यो गाडी जुन अबस्थामा भेटिएको हो त्यै अबस्थामा संग्रहालयमा राख्नुपर्ने हो । तर बल्खुकालाई मर्मत गरेर चढन हतारो भईहाल्यो । खटारो बनेपछि फेरि बल्खुतिरै फालेका छन क्यारे । उनै जानुन ।
नारायणहिटिबाट पश्चिमतिर सरेर पूर्बराजा बनेका ज्ञानेन्द्ध सर पनि कम्ता लोभीपापी थिएनन । दरबारभरि करोडौका गाडी हुदाहुदै यिनले १० – १२ करोड पर्ने केही थान रोसरोयल्स गाडी झिकाएका थिए। राजाबाट हटने बेलामा समेत ‘४० थान गाडी चाहिन्छ’ भन्दै र् याल चुहाएथे रे यिन्ले।
उपकुलपतिले चढने गाडी दिएन भन्दै रोनास्टका उपकुलपति दयानन्द बज्राचार्यलाई तत्कालीन बिज्ञानमन्त्री प्रकाश कोईरालाले खेदो खनेको कथा कम्ती रोचक छैन । नपत्याए बज्राचार्यले लेखेको ‘मन्त्रीको गाडीमोह ‘ पढे हुन्छ ।
मेरो सम्झनामा आएका माथिका बाह्र बुदे टिपोट प्रतिनिधि घटना मात्र हुन । खोजिपसे अरु सयौ लोभीपापीहर भेटिन्छन । दुनिया नाकमुखैजोतेर मन्त्री पदका पछाडी दौडिनुको मुख्य कारणनै ‘गाडीमोह ‘रैछ । डा बाबुराम भट्टराई र प्रदीप ज्ञवालीजस्ता एकाध अपबादबाहेक । डा भट्टराईले गृहले दिएको गाडी सुबिधा नलिएर अर्थ मन्त्रालयभित्रै फ्याकिएको कुनै गाडी मर्मत गरेर चढेको खबर सुनिएको थियो ।
देश लुटेराको लामो लर्कनलाई निकैबेर हेरिराख्दा मैले किसुनजीलाई एकपटक सम्झे । कुनै बेलाका प्रधानमन्त्री किसुनजी बिदाको दिन सरकारी गाडी चढदैनथे रे । ट्याक्सी चढथे रे । त्यस्ता नेता नी यै देशमा थिए ।
(६ बर्षअघि नागरिक दैनिकमा छापिएको लेख । )
Posted bymilanbagale March 19, 2011 Posted inUncategorizedLeaveacomment on मन्त्रीलाई गाडी हैन ‘गोरुगाडा ‘